ငဆန်နီရေဒီယို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ငဆန်နီရေဒီယို
Posted by Sonny on Aug 17, 2012 in Creative Writing, Critic | 25 comments
အိုဘားမာကတော့ အိုဟိုင်းရိုး ပြည်နယ်ဈေးရောင်းပွဲ (ကားပြိုင်ကွင်းနားမှာ) Ohio State Fair ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ကသူ့ကို
Smoothie ဖျော်ရည်တစ်ခွက် ပေး တော့ သူပြောတဲ့စကားလေးကောင်းလိုက်တာ။
“Smoothie sounds OK, butabeer sounds better.” တဲ့။
“သစ်သီးဖျော်ရည်ကတော့ကောင်းမယ့်ပုံပါကွာ ဒါပေမဲ့ ဘီယာတစ်ခွက်ကပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်တဲ့…” (သူများသမ္မတများခိုးပြီးဘီယာမသောက်ဘူးနော်ပြောင်လုပ်တာ)
ဘီယာဆိုင်လေးက အမေရိက ထောက်လမ်းရေးတွေက သဘောလောက်ပဲလုံခြုံရေးအရ ရှင်းထားတာတဲ့ partially cleared out by the US Secret Service လို့ရေးထားတယ်
(..အင်း ဒီမှာတော့ ကြက်တူရွေးကတော်တော်မယ်ဘော်ကကဲပါ။ မလာသေးဘူး မ၀င် ရ ဆိုင်းဘုတ်က အရင်ရောက်တော့တာပဲ…..ကျူံးဘေး ဆိုင်ဘုတ်လေး တင်တာတောင် လမ်းပိတ်တယ်ဗျ..ကြုံဘူးကြမှာပါ ၂၆ လမ်းနဲ့ ၇၈ ထောင့်လေ..မန်းလေးနော်..)
ဘီယာဆိုင်လေးနားမှာ သူ့ပရိတ်သတ်က ကြွေးကြော်သံပြိုင် အော်ကြတယ် “Four more beers!!!” တဲ့ အဓ္ဓိပါယ်ကတော့
“Four more years!!!” ဆိုတဲ့သဘောပါ။
( ကျနော်တို့ ၂၀၁၅ ကျ ရင်တော့ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ပွဲနားနီးရင်
(offering to buy 10 of them beer tickets from his own billfold)
Who’s over 21, you got to buyabeer!” လို့အော်ပြောပါတယ်။
“ဟေး အားလုံးနော်..အသက်၂၁ ကျော်မှဘီယာ ၀ယ်သောက်လို့ရမယ်နော်”
လို့သတိလည်းပေးရင် ဘီယာ လည်းဝယ်ပေးရင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။
အသေးအမွှားကိစ္စလေးပါ။ ဒါပေမဲ့ အမေစု ပြောတဲ့ Rule of Law ဥပဒေစိုးမိုးရေး
ဆိုတာ အဲဒါ မျိုးပါ။ ( အင်း..ကျနော်တို့တိုင်းပြည်များ ၂၁ အောက်တွေ ဘီယာဆိုင်မှာ ခြေချင်းလိမ်နေကြပါတယ် အရက်ဆိုင်ဘီယာဆိုင်လည်းပေါမှပေါ။ သောက်ရပါတယ် ဆယ်ကျော်သက်အောက်တွေတော့ မရေားင်းရ ဥပေဒထုတ်သင့်ပါပြီ။ရောင်းသူတွေ့သေဒဏ်ပေါ့။ ၂၁ အောက် သောက်သူတွေ့ ပြစ်ဒဏ်ပေးပေါ့)
(နောက်တစ်ခုတွေးမိတာက အိုဘားမား က အားပေးတဲ့သူတွေကိုသူ့ပိုက်ဆံအိတ်
ထဲကပိုက်ဆံ နှိုက်ပြီးဝယ်ပေးရင်း (from his billfold)
ဆိုတဲ့ကိစ္စပဲ..သေချာတယ် အိုဘားမာ ကိုယ့်လခကိုယ်သုံးတာဗျ)
နေဦးဗျ..အန္ဒိယသမတဟောင်းတစ်ယောက်က (သိပ္ပံပညာရှင် ဂြိုလ်တု ပညာရှင်)သူသမ္မတ ဖြစ်ပြီး သမ္မတအိမ်တော်ကိုလာတော့သေတ္တာလေးနှစ်လုံးကို စာအုပ်တွေအပြည့်နဲ့
တက်လာတာတဲ့ (သက်တမ်းကုန်)ပြန်သွားလည်းဒီသေတ္တာလေး နှစ်လုံးပဲပါသွားတယ်တဲ့။
(အင်း..ဒီမှာတော့ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း များ မည်မျှချမ်းသာကြောင်း လွှတ်တော် တင်ပြရမည် ဆိုတဲ့အဆို ကို မဲ အပြတ်အသတ်နဲ့ ရှုံးသွားတယ်တဲ့။ ဒီလိုတင်ပြဖို့ အချိန်ယူ ရဦးမယ်တဲ့။)
အချိန်ယူဖို့ဆိုတာ.. သိမ်း ဖို့ ဆည်း ဖို့ ထုတ်ဖို့ ဖွက် ဖို့ များ အချိန်ယူကြမလို့များလား…တွေးမိပြန်ရော
အင်းလေ ငဆန်နီ ဥာဏ်မမှိ တာနေမှာပါ……….
ဗဟုသုတနော် ဒီသတင်းတွေကို Obama Booze Strategy (အိုဘားမာ ဘီယာ မယ်ဆွယ်နည်းလမ်းပေါ့) လို့ခေါ်တယ်တဲ့
Time US Specials သီတင်းများမှ ကိုးကား
အိုဘားမားဘီယာဝယ်လာစဉ် ဘီယာအမျိုးအစားက Bud Light တဲ့
ဒီပုံက မန်းလေးက ကျူရှင် သင်တန်းမဟုတ်ဘူးနော် အဲဒါ ဘီအီး ရောင်းတဲ့ဆိုင် ငဆန်နီ ခိုးရိုက်ထားတာ အဲဒါသာကြည့်ပါ။ အရက်အဆီတွေကို စပ်ပြီးရောင်းတာဗျာ. အရမ်းကိုစည်ကားတဲ့ဆိုင်လေးဗျာ.တော်တော်သောက်သူများတယ်။ ဆိုင်ကတော့စီးပွားရေးဆိုတော့ရောင်းမှာပဲ။ ငယ်ရွယ်သူတွေအများကြီးပါတယ်။ ညစဉ်စဉ်တွေ့နေရတယ်။
ဘီယာလေးခွက်ထပ်သောက်ပါ ဦးလို့ပြင် ဆင်ဖတ်ရှု့ပေးပါ။
ညီငယ်မောင်ပေလဲ ၊ အဲဒီကိုဆန်နီ ပြောတဲ့ အရက်အဆီများကို ရောချင်တဲ့အချိုးနဲ့ ရောရောင်းနေကြတဲ့ ဘီအီးမန်းဘဝမှာ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ တုန်းက တစ်နှစ်လောက် ကျင်လည်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။
ကျွန်တော်ထိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကတော့ ၃အချိုး၁ ဆိုလားပဲဗျ ၊ သောက်ရတဲ့အရသာကတော့ ဘီအီးဆိုင်တွေထဲမှာ နာမည်နဲနဲကြီးတဲ့ဆိုင်ပေါ့ဗျာ
ဘီအီးဆိုတဲ့အမျိုးက အချိုရည်တွေဘာတွေလဲ ရောစရာမလို ၊ သူနဲ့ တွဲဖက်စရာအမြည်းတွေကလဲ .. အောင်မယ် စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေမှာ သိပ်မရနိုင်တဲ့အမြည်းလေးတွေနဲ့ ဗျ … ပဲလှော်ကြော်သုပ် ၊ ဆိတ်သည်းကြော် ၊ ဝက်အူချောင်းကြော် ၊ ဆိတ်သား အမဲသားကြော် ၊ ဆိတ်ရိုးကုလားပဲဟင်း ၊ ငါးဖောင်ရိုးခြောက်ကြော် ၊ ရာပြည့်ကြော် ၊ ငါးရှည့်ထောင်းချဉ်စပ်ကြော် ၊ ဖားကြော် ၊ မြေပဲဆားလှော် ၊ တစ်ချို့ ဆိုင်တွေက နှမ်းဖတ်ချဉ် တစ်ချို့ ဆိုင်တွေက ချည်ရေဟင်း တစ်ခွက် အလကားပေးသေးတာဗျာ
ကျွန်တော်ဘီအီးမန်းဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကဗျာ ပိုက်ဆံတစ်ထောင်ရှိရင်ကို ဘီအီး၂လုံးလောက်နဲ့ အမြည်း၃မျိုးလောက်ရယ် စီးကရက်၎လိပ်လောက်ရယ် ကောင်းကောင်းကြီးရတာဆိုတော့ ဘီယာဆိုင်သိပ်မသွားဖြစ်တော့ပဲ ၊ ပိုက်ဆံ များသည်ဖြစ်စေ နဲသည်ဖြစ်စေ ဘီအီးဆိုင်မှာချည်းပဲ …
တစ်နှစ်လောက်လဲနေရော… မျက်နှာကြီး ဖောအမ်းလာတာကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြန်သိတဲ့အချိန်ကြမှ ဒီတစ်သက်ဘီအီးလုံးဝမသောက်တော့ဘူးဆိုပြီး ဘီအီးလောက ကနေ မနဲထွက်လာခဲ့ရတာကလား
ဘီအီးလောကတုန်းမှာ တွဲသောက်ဖော်သောက်ဖက်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ လိုင်းကားဒရိုက်ဘာတွေ ၊ စပါယ်ယာတွေလဲ အခုမရှိကြတော့တာများပါတယ် ( ရှောကုန်ကြတာ )
၂၀၁၁ကစပြီးလား ၂၀၁၂ကစပြီးလား အတိအကျမမှတ်မိပါ ။ ယစ်မျိုးလိုင်စင်/အရက်ရောင်းခွင့် လိုင်စင်အသစ်ထပ်မပေးတော့ဘူး လို့ သိခဲ့ရပေမယ့် ၊ ဆိုင်အသစ်တွေကတော့ ထပ်ထပ်မြင်နေရစဲပါပဲ
ကိုဆန်နီရေ ပေနဲနဲရှည်သွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ
ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေ ဒီဝါကျွတ်မှာ ကျွန်တော်တို့ စားရပါစေဗျား
ဘီအီးက ဘာတွေနဲ့ရောစပ်ချက်လုပ်လို့ မျက်နှာကြီးဖောလာရတာတဲ့လဲ ကပေ။ အကျယ်သိရင် မိန့်တော်မူပါအုံး။ ဗဟုနဲ့ သုတ ရတာပေါ့။
ကျွန်တော်သိထားတာကတော့ နဲနဲလေးပဲမို့ 
ပိုသိတဲ့ ရွာသူားများက ဝင်ပြီး ရှင်းပြကြပါလိမ့်မယ်ဗျား
ညီလေး ရေးတဲ့ အမြည်းတွေကစုံသကွ ရေးတတ်ပါပေတယ်
ညီလေးရေ တကယ် ကျေးဇူးတင်တယ်နော်
တစ်ခုက မူးရင်ကြောက်တတ်တယ် မမူးရင် လုံးဝမကြောက်တတ်ဘူး
တင့်ခရု ဗဲရီးမက်ခ်ျ ပါ ကိုဆန်နီရေ
ဝါကျွတ်ချိန်ကြမှ တစ်ရက်လောက် ဆုံကြသေးတာပေါ့ဗျာ
အနော့်ကို ဘက်စ်ကွန်မင့်ရွေးပေးလို့ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား
မောင်ပေ ( ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ဘီအီးမန်း)
ကိုပေပြောမှ တွေးမိတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ ငယ်ဆရာက ဘီအီးဗျ။ ကျွန်တော် အရက်စသောက်တတ်တာက အိမ်ကမိဘတွေက ၀န်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အလျောက် သူတို့ ကရုံးသွားနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်သောက်မိတာပဲ။ မှတ်မှတ်ရရ ၇ တန်း ဂတန်း ကျောင်းသားဘ၀ လောက်တုန်းကဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ကျောင်းက နေလည် လွတ်တဲ့ကျောင်းဆိုတော့ အိမ်ပြန်ရင် အိမ်မှာ ဘယ်သူ မှ မရှိ အဲဒီမှာ အတတ်ဆန်းချင်တဲ့ င အာဂ ကလည်း အိမ်က ယတြာချေတာလားဘာလားတော့မသိဘူး ပုလင်းအစိမ်းရောင်ထဲ ကျောက်စလစ် ခဲ့ ကိုးခဲထည့်။ရေအနည်းငယ် ဘီအီအရက် အနည်းငယ်ထည့်ပြီး နှင်းဆီပန်းကိုးပွင့် ထည့်ထားရတယ်။ တစ်ပါတ်တခါလဲပေးရတယ်။ လာဘ် ရွှင်ဆိုလားမသိဘူး ။ အဲဒီပုလင်းထဲက ဘီအီးရေရောပြီးသား ကိုရေထပ်ရောရင် တစ်ယောက်တည်း စည်းစိမ်ရစ်ရာက စတယ်လို့ပြောရမလိုပဲဗျ။
မကွေးမှာတော့ ဘီအီးကို အရောအစပ်ကောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာသောက်ဖူးတယ်။ ဘာလဲ ဘီကရင် (ဘီအီးကရင်ဆော်ဒါ)။ဘီလိမ္မော်။စသဖြင့်…။နောက်ရန်ကုန်မှာတော့ ၄၂လမ်း(ဘီအီးလမ်းလိုဆိုရမလိုပါပဲ)အဲဒီက စပ်ဘီအီးနဲ့ လက်ဖက်သား အရမ်းမိုက်တယ်။နောက် လမ်း ၃၀ အောက်ဘလောက်က ချမ်းသာ ဘီအီးဘီယာဆိုင်လည်းမိုက်တယ်။
အရက်ဖြူ ဆိုင်အမှတ်( ) တွေနဲ့
ကျနော်သိသလောက်အမှတ် ( ၂၁ ) ထိရှိဘူးတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ငယ်ငယ် ကအဲလိုဆိုင်ထဲဝင် ရင် လူကြီးတွေက ငေါက်လွှတ်တယ်
ငါတို့ပဲသောက်မယ် မင်းတို့ဝေးဝေးနေမကောင်းဘူးပေါ့။ အခု လူကြီးတွေက လူငယ်တွေကို
မဆူကြတော့ဘူး။ အစိုးရက အရက်ဆိုင်နဲ့ဘီယာဆိုင်များများဖွင့်ခွင့်ပေးထားတယ်။ အခွန်များများရအောင်နေမှာပေါ့။ လူငယ်တွေပျက်တာမစဉ်းစားဘူး။ လူငယ်တွေကို ဥပဒေနဲ့တားရမယ်။
အင်းလေ ကျောင်းသားလေးတွေ လူငယ်တွေ ဆုံးရှုံးမှာ စိုးပါတယ်။
ဒီမှာတော့ ကလေးတွေလဲ ၀ယ်ရင်ရောင်းတာပါဘဲ
ကလေးထောင်ထားရမယ်..နိုင်ငံတစ်ခုမှာ ကျောင်းသားပထမတစ်ခါကျောင်းလစ်ရင် သူ့ကို
ဆူတယ်..ဒုတယတစ်ခါ ကျောင်းလစ်ရင် မိဘကို ထောင်ဒဏ်အသေးစားပေးတယ်
တတိယတစ်ခါတော့ကျောင်းထုတ်ပစ်တယ်။ ချာစ်ရဲ့သား တစ်ခါ မှုးယစ်ဆေးသောက်လို့
ချားစ်ကိုယ်တိုင် rehabilitation center ကို ပို့လိုက်တယ်…မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ငှက်အော်စန်းဆိုလားပဲ။
ဒီနယ်ဖက်မှာ လဲ အဲ့လိုဆိုင်တွေ အပေါသားးးးလားးး
” နောက်သူကဘီယာဆယ်ခွက်စာလောက် အားပေးတဲ့သူတွေကို”သူပိုက်ဆံအိတ်
“(နောက်တစ်ခုတွေးမိတာက အိုဘားမား က အားပေးတဲ့သူတွေကို”သူ့ပိုက်ဆံအိတ်
ထဲကပိုက်ဆံ နှိုက်ပြီးဝယ်ပေးရင်း “”
ကိုယ် ညီလေး လား ကိုလေးလား မခေါ်တတ်ဘူး
အော် အကိုဆန်နီရေ အိုဘားမားကြီးက သူ့အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံထုတ်သုံးတယ်ဆိုလို့ သဘောကျလို့ပါ။
သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေက ပွင့်လင်းတယ် ထင်သာမြင်သာရှိတယ်
အခုစာတွေကို.. တကယ်ကိုပဲ..ရေဒီယိုလို.. အသံသွင်းပြီးလွှတ်ထည့်လိုက်ရင်.. တော်တော်ကောင်းမယ်..
လုပ်လိုက်လေ သူကြီး ကြာသလားလို့
ကိုဆန်နီရေ သူကြီးအက်ကြောင်းထပ်နေတဲ့ လူဆိုတာကြောင့်ပါ ။
ကျမတို့ ကိုယ်တိုင်က စပြင်မှ ရမှာလေ။ နောက်မျိုးဆက်အတွက် ကောင်းသောအကြောင်းတွေ လက်ဆင့်ကမ်းဖို့ မျှော်လင့်ကြတာပေါ့။
မှာ အသံသွင်းပြီး… (၀ါသနာပါရင်). နဲ့ဗီဒီယိုပါရိုက်ပြီး.. တင်လို့ရအောင်လုပ်ထားပါတယ်..
Bandwidth တွေအများကြီးဝယ်ထားတာ.. သုံးမဲ့သူမရှိလို့.. :?
အသံသွင်းပြီးရင်… kai@myanmargazette.net ကိုပို့စေချင်ကြောင်း..
ွှTango Software ဒေါင်းလိုက် ကောင်းတယ်
အခု ဒီမှာ ဖုန်းက software က compatible ဖြစ်ရင် Tango ဆိုတဲ့ ဒေါင်းလုပ်
လုပ်ပြီး video message ပို့လို့ရပြီ။ ကျနော်စမ်းကြည့်ပြီးပြီ။
Short Range recording လုပ်လို့ရတယ်
ကိုဆန်နီလည်း.. အသံလေးဘာလေးသွင်းပြီး.. ဆန်နီရေဒီယိုလုပ်ကြည့်ပါလား..
မန္တလေးမှာ.. FM ရေဒီယိုလာလုပ်ချင်လုပ်ဖြစ်မှာနော…
မြန်မာပြည်လို.. ကျယ်တဲ့တိုင်းပြည်က.. ရေဒီယိုလိုင်းတွေ.. ခေတ်စားလာမှာ.. သေချာပါတယ်..
မန်းတလေးကို လာပြီး မန်းတလေးဂေဇက် အက်ဖ်အမ် ဆိုပြီး သဂျီးကိုယ်တိုင် လုပ်ဗျာ
သဂျီးက ရုပ်ကလဲ ရှိပြီးသား ဆိုတော့… ပြောမရဘူး
မဟာနှုတ်ခမ်းမွှေးနဲ့ ဝင်းဦးလိုမျိုး စာရေးဆရာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် အဖြစ် မြင်ရဖို့ စောင့်နေမယ်ဗျို့ 
ချယ်ရီ Fm တော်တော်လေးရှိနေပြီ။
ငဆန်နီအသံ ကသာယာဘွယ်မရှိလို့ အသံမသွင်းပါရစေနဲ့။